Madaxweynayaasha Jubbland iyo Puntland oo kusoo wajahan Muqdisho | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynayaasha Jubbland iyo Puntland oo kusoo wajahan Muqdisho
Madaxweynayaasha Jubbland iyo Puntland oo kusoo wajahan Muqdisho
Maalinta berri oo Sabti ah oo ay ku beegantahay 21-bisha ayaa waxaa la filayaa in Xarunta Teendhada Afisiyooni ee Magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka Golaha wadatashiga oo ka kooban Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxda dowlad Goboleed iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.
Shalay ayaa qorsuhu ahaa in uu shirka furmo, balse uu dib u dhacay, waxaana Magalada Muqdisho ku sugan, Ra’iisul Wasaare Rooble, Madaxweynayaasha, Hir-Shabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Guddoomiye Cumar Filish.
Saacadaha soo socda ayaa waxa la filayaa inay magaalada muqdisho ay soo gaaraan Madaxweynayaasha dowlad Goboleedyada Jubbaland iyo Puntland, kuwaas oo shirka qeyb ka ah.
Shirka Golaha wadatashiga qaranka ayaa waxaa looga hadli doonaa diyaar garowga Doorashooyinka Golaha Shacabka, diyaarinta habraacyada doorashooyinka, raadinta Dhaqaalaha ka dhiman ee ku baxaya doorashooyinka iyo sidii horey loogu socon lahaa.
Previous articleMadaxweyne Dowlad Goboleedka KG oo xaflad u sameeyey xildhibaanada Aqalka sare iyo kuwa maamulkaas “Sawirro”
Next articleErdogan oo fariin la xariirta qaxootiga Afghanistan u diray dalalka Yurub